Somaliya Oo Markii Ugu Horaysay Ka Qayb Galaysa Ciyaaraha Olombikada Naafada Aduunka (SAWIRO) | Somali Association for the Blind (SAB)
Somaliya Oo Markii Ugu Horaysay Ka Qayb Galaysa Ciyaaraha Olombikada Naafada Aduunka (SAWIRO)
Ciyaaryahanka Farxaan Hadafow oo ah 19 jir ayaa noqday qofkii ugu horeyay ee abad calanka somaliya ka soomuujiya fagaraha ciyaaraha Olombikada nafaada isgoo xiran fanaanadda ay kuxardhantahay astaanta somaliya, taasi oo ka dhigan inuu yahay qofkii ugu horeyay ee matala somaliya tan iyo markii labilaabay ciyaaraha Olompicada aduunka.
Faraxaan oo leh rajo wanaagsan oo dhanka ciyaaraha nafaada ayaa iskudiyaarinaya inuu maalinta jimcha uu ku ordo garoonka markaano ee magalada Rio ee dalka Brazil.
Ciyaaraha Olombikada Naafada ayaa 7-da bishan Sebtember ka bilaaban doona magaalada Rio Brazil, waxaana sanadkan markii ugu horreeysey taariikhda ka qayb qaadan doona dalkeenna Soomaaliya.
Dufcadda 23-aad ee ciyaaraha Naafada Olombikada Adduunka ayaa ka kooban 528 waqcadood oo qaadan doona 11 maalmood, kuwaasoo lagu bixin doono 225 billadood oo haweenka ah, 265 ragga ah iyo 38 billadood oo isku dhaf ah.
Waxaana sanadkan Somalia ciyaarahan ku metalaya Farhan Hadafoow, oo ah 19 jir ah, iyadoo ay Somalia masraxa kasoo muuqan doonto 8-da bishan, iyadoo uu Farxaan tartami doono 5:30 xilliga Muqdisho.
Talbaada farxaan oo ah mid kor uqaadi karta rajada dadka naafada ee somaliya oo laga iloobay xuquudii ay kulahaayeen bulshadaayaasid ayaa taasi waxay ka dhigi kartaa inay soo ceshadaan moraalkoodii islamarkaana ay wax la qaybsadaan bulshada inteeda kale.